Iimpawu zeHuawei P30 kunye neP30 Pro zityhiliwe I-Androidsis
Ukuqinisekisa zonke iinkcukacha zoyilo kunye neempawu zeHuawei P30 kunye neP30 Pro
Ayiloxesha lokuqala ukuba sithethe ngamacandelo ahlukeneyo obuchwephesha kwiiflegi ezilandelayo zomenzi waseAsia. Ngelixesha besithetha nge Iisampulu zekhamera yeHuawei P30 Pro. Kwaye ngoku sinokuqinisekisa okuninzi kwifayile ye- Iimpawu zeHuawei P30 kunye neP30 Pro, ukongeza kuyilo oluya kuba nazo zombini izixhobo.
Lumka, umthombo wokuvuza awukho ngaphezulu okanye ngaphantsi kukaRoland Quandt, umntu odumileyo ovuza iJamani othe wasothusa ngokusityhila ngokupheleleyo Iinkcukacha zeHuawei P30 kunye neHuawei P30 Pro. Ungaphoswa ngabo.
1 Oku kuyakuba kuyilo lweHuawei P30 kunye neHuawei P30 Pro
2 Oku kuya kuba ziimpawu zeHuawei P30 kunye neP30 Pro
2.1 Isixhobo seHuawei P30
2.2 Isixhobo seHuawei P30 Pro
Oku kuyakuba kuyilo lweHuawei P30 kunye neHuawei P30 Pro
Siza kuqala ngokuthetha malunga nokuba amalungu amatsha e-Shenzhen-based-P's usapho ajongeka njani njengoko kukho izinto ezimbalwa ezitsha xa kuthelekiswa nemodeli yangaphambili esele intle emilonyeni yethu.
Ukuqala, siyabona ukuba kulo mzekelo zombini iimodeli ziya kuba nefayile ye- inotshi kwiscreen, kodwa eli xesha limile njengokuhla kwamanzi, Ukwaphula i-aesthetics yesiphelo ukuya kubuncinci. Kule nto kufuneka songeze ezinye izakhelo ezincinci zokubonelela ngoyilo lwangoku ngakumbi nolunomtsalane.
IHuawei P30 iza kuza nesimanga kwimo yekhamera yasebusuku [Teaser]
Gqamisa imiphetho ejikelezileyo, ukuqhubeka nokunciphisa isakhelo esingaphambili, ukongeza kukungabikho komfundi ofunda ngomnwe ngasemva ukusukela, phakathi Iimpawu zeHuawei P30 kunye neHuawei P30 Pro ibandakanya ukufundwa kweminwe edityaniswe kwiscreen sayo.
Kwaye ekubeni sithetha ngasemva kweHuawei P30 kunye neHuawei P30 Pro, sinenye inkcukacha ephawuleka ngokwenene: i icandelo lokufota. Kwaye, isimanga sokuqala esisibonayo kwiHuawei P30, eya kuthi ngoku ibe nenkqubo yekhamera kathathu yokubonelela ngemifanekiso emangazayo, njengoko siza kubona kamva xa sikuxelela malunga neempawu zayo.
Kwimeko yeHuawei P30 Pro, umkhonto olandelayo wosapho luka-P uya kuqhubeka nenkqubo yekhamera kathathu, nangona phantsi kwesibane se-LED yesixhobo sinothusayo: inzwa yesine ye-ToF yokubamba ubunzulu kwaye sikwazi ukuskena kathathu ubungakanani bawo nawuphi na umcimbi.
Oku kuya kuba ziimpawu zeHuawei P30 kunye neP30 Pro
Masiqhubeke sijonge izixhobo zekhompyutha eziza kunyuka ukusukela oko, kuyacaca ukuba uHuawei ubeke yonke inyama kwi-grill ukwenza ezi fowuni zibe ngamarhamncwa anokukhuphisana ubuso ngobuso nembangi yabo enkulu: i Samsung Galaxy S10.
Isixhobo seHuawei P30
Ukuqala, le modeli iya kuba nesikrini se-OLED esinepaneli ene-diagonal yee-intshi ze-6.1 kunye nesisombululo seepikseli ezingama-2340 x 1080. Lumka, isikrini seHuawei P30 senziwe yiSamsung, eqinisekisa umgangatho ongazange ubonwe.
Kule nto kuya kufuneka songeze iprosesa yaseKirin 980, i-SoC engundoqo esibhozo kunye ne-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcinwa kwangaphakathi ukubonelela ngaphezulu kokusebenza ngokwaneleyo ukuhambisa nawuphi na umdlalo okanye usetyenziso ngaphandle kokuphazamisa.
Ikhamera yeHuawei P30? Iya kuba necandelo lokufota elimangalisayo. Ukuqala, uya kunyuka inzwa yokuqala ye-megapixel engama-40 ngokuvula okungu-1.8 kugxilwe ukufota kuyo nayiphi na imeko.
Kule nto kufuneka sidibanise Isandi sesibini se-megapixel yesibini ngokuvulwa okungagxili ku-2.2 okuya kusebenza njenge-engile ebanzi ukukuvumela ukuba uthathe iifoto ezizodwa zepanoramic. Kwaye igumbi lesithathu liya kuba ngu I-8 megapixel yefowuni yeelensi eyi-2.4 ijolise.
Asinakulibala ikhamera ye-megapixel engama-32, ewe ukuhlangabezana neemfuno zakhe nawuphi na umthandi weeselfie, ukongeza kwifayile ye- I-3.650 mAh ibhetri ukuxhasa ubunzima obupheleleyo bezixhobo zekhompyutha. Kwaye inguquko yenkqubo yokusebenza kukaGoogle? Ipie ye-Android 9.0, phantsi komgangatho wesiko le-EMUI 9.1, njengoko kulindelwe.
Isixhobo seHuawei P30 Pro
Kwimeko yemodeli eneevithamini ngakumbi, isikrini sayo siya kuba ne-diagonal yee-intshi ezingama-6.47 ukongeza kwisisombululo seepikseli ezingama-2340 x 1080 ezinobuchwephesha be-OLED. Kule nto kufuneka songeze i-Kirin 980 SoC kunye ne-8 GB ye-RAM kunye neendlela ezintathu zokugcina izinto ezahlukeneyo: i-128, 256 kunye ne-512 GB yememori yangaphakathi.
La Ikhamera yeHuawei P30 Pro Iya kuba lirhamncwa lokulawula kwicandelo kwakhona: iilensi zokuqala ezingama-40-megapixel ezine-f / 1.6 ukuvula kunye nokuzinziswa komfanekiso ozinzileyo, inzwa yesibini ye-20-megapixel ene-2.2 yokugxila eya kwenza imisebenzi ye-engile ebanzi, kunye ne-sensor yesithathu 8 megapixel ngokuvula f / 2.4 eya kuvumela ukusondeza okungu-8X. Ewe, siya kuba nekhamera yeToF ukuze sikwazi ukuthatha iifoto ze-3D kwaye, umzekelo, imephu yegumbi ukuze ikwazi ukubonelela ngemigama yokwenene.
Nangona ikhamera yangaphambili iya kufana nenye imodeli, ii-megapixels ezingama-32, ziqaqambisa isikrini sayo esikhulu sama-4.200 mAh, ukongeza kwiPie ye-9.0 ye-Android phantsi komaleko we-EMUI 9.1. Olunye ukusebenza okuphezulu. ¿Ucinga ntoni malunga neempawu zeHuawei P30 kunye neHuawei P30 Pro?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Ukuqinisekisa zonke iinkcukacha zoyilo kunye neempawu zeHuawei P30 kunye neP30 Pro
Iindidi ezimbini ze-Oppo Reno elandelayo ziye zaqinisekiswa nge-Snapdragon 710
UGoogle uya kusebenza kwifowuni esongiweyo